Home Wararka Dibada Cuntada saboolku ay soo saaraan ee madaxweynuhu uu cuno
Cuntada saboolku ay soo saaraan ee madaxweynuhu uu cuno
Mid ka mid ah tixanaha sheekooyinka ay BBC-da la soo wadaagatay haweenay wariye ah oo u dhalatay dalka ,Ghana laguna magacaabo Elizabeth Ohene ayaa diiradda saaraysa baaqii madaxweynaha Ugandha Yoweri Museveni ee ahaa in dadku ay cunaan Moxogga xilli qiimaha sarreenku sare u kacay qaybo ka mid ah dunida .
Galbeedka dalalka Afrika waxaa ka jira laba geed oo ah khudaar xidid ah waana Moxogga iyo nooc ka mid ah Moxogga oo isana loo yaqaanno yam.Moxogga waxaa la helaa sanadkoo dhan waana raqiis waxaana loo yaqaanaa cuntada dadka saboolka ah .
Geedka kale ee caanka ah waa yam ama mooc ka mid ah Moxogga ,kaasi oo qoraa u dhashay dalka Nigeria, laguna magacaabo Chinua Achebe uu ku tilmaamaay “boqorka dalagyada”.
Gooashada noocan ka midka ah Moxogga si aad ah oo xamaasad leh ayaa loo sugaa sanadkii. Dadka qaar dabaal degyo gaar ah ayay sameyaan ka hor intaan la cunin geedkaan, waxayna xirtaan dhar gaar ah, Moxoggu waa cunto maalmeedka ugu wanaagsan wuxuuna ahaan jiray sidoo kale cuntada joogtada ah ee dadka saboolka ah iyo deegayaasha.
Madaxweynaha Ugandha Yoweri Museveni ayaa xusay in dadka dalkiisa uu ku boorinayo inay u soo jeestaan isticmaalka Moxogga si looga hortago dhibaatada sare u kaca qiimaha Sarreenta oo hadda laga dareemayo meelo badan oo ka mid ah caalamka.
“Haddii la waayay Rooti,cuna Moxogga “ayuu yiri, madaxweyne Museven.
Hadalka Museveni ayaa dhaliyay muran badan, iyadoo dadka dhaliila ay sheegeen inuusan haynin qorshe dhab ah oo uu wax kaga qabanayo dhibaatooyinka maciishada ee dalka ka jira.
Wasiirka maaliyadda ee dalka Chana oo soo hadal qaaday sheekooyin taariikhi ah oo dhacay 1960-meeyadii, ayaa isku dayay in uu qiil uga dhigo kordhin la soo jeediyay oo la xiriirta cashuuraha isaga oo leh masaakiinta ma saamayn doonto sababtoo ah waxay cunaan Gari – bur caano ah oo caan ah oo laga sameeyo Moxogga warshadaysan.
Xiligaas uu tusaalaha u soo qaatay cuntada Gari waxa ay caan ku ahaa dadka danyarta ah,waxana uu wasiirku ka dhawaajiyay in haddii aad ku darto biyo nus koob ah ay barakoobi doonto si ay ugu filnaato ilaa saddex qofood. Balse xlligaas waxay ahayd cunto raqiis ah marka hadda la bar-bardhigo
Sanado kadib wasiir dowle ka tirsan dowladda Chana oo ka hadlayay kororarka qiimaha cuntada ayaa sheegay in dadlku mar walba ay cuni karaan cuntada kokonte, oo ah nooc ka mid ah Moxogga oo la shiiday ama la’ tumay kaas oo ka qarash yar bariiska iyo baasatada dibadda laga keeno. Kokontaha oo ah daqiiq laga sameeyo Moxogga waxaa isana inta badan cuna oo isticmaala dadka danyarta ah.
Madaxweyne Yoweri Museveni waxa uu sheegay inuu cunay Moxogga si kale haddii loo dhigo, waxaa uu muujiyay inaan qofna ka xishoon inuu cuno, ama la arko isagoo cunaya, Moxogga, maadaama hadda laga cunayo madaxtooyada dalka. Moxogga waxaa la sheegay inuu leeyahay faa’iidooyin caafimaad.
Gabadha wariyaha ah ee warbixintaan qortay ayaa sheegtay in aysan garaneyn in cuntada Moxogga ay tahay mid ku suntan oo gaar u ah dadka saboolka ah ee dalka Ugandha blase gudaha Ghana, waxay sheegtay in dadku howlo badan ayay ka soo mareen arrintaan.
Daqiiqda Gari oo ah cunto laga sameeyo Moxogga nooc ka mid ah waxay isticmaalkeedu sare u kacay markii dadka saboolka ah iyo dhamaan aradyada Iskuullada hoyag laga dhigto ay u noqotay cuntada ay ku tiirsanyihiin. Sidoo kale habka loo kariyo ayaa ah qaab fudud oo aan culays ku ahayn qofka,uma baahna karin badan ama foornada “microwave) si aad u kululeyso – waxaad soo qaadanaysaa koob Gari ah ku dar biyo, sonkor iyo caano, kadibna waad isku qasaysaa sidaas ayaadna ku haystaa cunto aad markaa cunto.
Si kastaba cuntooyinka kala duwna ee laga sameeyo Moxogga waxay noqnayaan kuwo dadku jecelyihiin oo waliba qaarkood ay ku fanaan marka loo eego xilliyadii hore,waxaase xiiso u yeelaya cunista Moxogga in madaxweynaha Ugandha Yoweri Museveni uu dadka ku dhiiro galiyo cunsita iyo isticmaalka geedka Moxogga.
Previous articleSameer Wankhede: Askarigii xiray wiilka Shah Rukh Khan oo ‘godkiisa ay biyo ugu galeen’
Next articleKhatar caafimaad oo ka dhalan karta hilibka digaagga oo la dhaqo ka hor inta aan la karin
DEG DEG Waa lamagaacay Ra’isulwasaraha XFS
MASAR oo si taxaddar leh u wajaheysa Soomaaliya kadib doorashadii Xasan...